Linus Torvalds Inoramba Linux Basa Rinoratidzira Ine Matambudziko NeStadia Port | Linux Vakapindwa muropa
malte skarupke mugadziri wemutamboIni ndinoburitsa fananidzo yekuita kwemakii akavakirwa paMutex uye Spinlock uchishandisa akasiyana siyana marongero ebasa. Bvunzo dzakaratidza kunonoka zvisina kujairika kureba kana uchishandisa Spinlock iine default task scheduler paLinux.
Munyori webvunzo akagumisa kuti iyo Linux task scheduler ine matambudziko izvo zvinokanganisa zvisina kunaka basa ra mitambo yakagadzirirwa iyo Google Stadia sevhisi, uko mitambo inomhanya paGPU munzvimbo yegore uye mutengi anongoyerera zvirimo zvemuchina kusvika pamakumi matanhatu mafuremu pasekondi.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi chekuratidzwa panguva yakakodzera kwemafuremu pachiratidziri, uye kunonoka kweanopfuura mamirisecond rimwe kunoonekwa.
Linus Torvalds akabatana mukukurukurwa kwehumboo, uyo akaidaidza kuti "marara chaiwo." uye muenzaniso wekuti ungawana sei zviratidzo zvisingaratidze chokwadi chaicho pasina kunyatsonzwisisa chidzidzo.
Torvalds akanyora kuti:
Chinyorwa chose chinoita sechakashata uye chiri kuyera chimwe chinhu chakasiyana zvachose nezvinofungwa nemunyori uye zvaanoti ari kuyera.
Chekutanga pane zvese, masplocks anogona kungoshandiswa chete kana iwe uchinyatso kuziva kuti hauna kugadzirirwa uchiishandisa ... Chaizvoizvo inoverenga iyo nguva isati yaburitsa kiyi, uye yozoiverenga mushure mekuwanazve kukiya, uye inotaura kuti iyo nguva mutsauko inguva iyo iyo kukiya isina kuchengetedzwa. Izvo zvakapusa uye zvisina basa uye zvakashata zvachose.
Ndiwo marara chaiwo.
Spinlock ndeye yakaderera-chikamu chemberi iyo inofanirwa kushandiswa munzvimbo yemushandisi nekungwarira kukuru uye kunyatsonzwisisa ruzivo; kana zvisina kudaro, unogona kuwana izvo tester yakaratidza.
Linus yakaraira vagadziri vemitambo kuti vasashandise spinlock uye kuti havaedze kuvharira avo ekuvharira masisitimu akavakirwa pairi, zvirinani shandisa zviripo zviratidzwa nzira kuzivisa iyo system kuti ivo vakamirira kuti iro kiyi iburitswe kuti vabvise zvinokonzereswa neanogadzira.
Spinlock-based plugins inogona kushandiswa chete nekuvimba kwakazara kuti programmer haizovhiringidze kuuraya kwavo. Iwo ma spinlock-based anokiya anoshandiswa mune bvunzo anoitwa kuburikidza neyekuzvigadzirira yekusunga inoshanda munzvimbo yemushandisi.
Iyo scheduler task inogona kutora kutonga chero nguva panguva yekuitwa kweiyi link uye chinja kune rimwe basa.
Kupiwa chiie kuyerwa kuyerwa kunoenderana nemhedzisiro timer kukosha, kunotsanangurwa kunonoka mumiyedzo yavanofukidza kwete chete kunonoka kuri mu controller ichivharira, asi zvakare kodhi iyo yaimhanyisa mune imwe mamirirondiko kuti.
Inoyera kwete chete izvo muyedzo akaedza kuyera, asi zvakare "ruzha" kubva kune kumwe kuverenga mune system.
Dambudziko nderekuti vagadziri havafanirwe kunge vaishandisa spinlocks pakutangar, kusvika, Yakanga isiri iyo Linux programmer yekupa mhosva, asi nzira dzevagadziri dzekuishandisa.
Munyori webvunzo akaedza kuramba Linus, uchicherekedza kuti iko kushandiswa kweanobata masisitimu-anokiya-anokiya masisitimu anowanzo shandiswa mukudzidzira mumitambo, kubvira kana uchishandisa vashoma mapurogiramu kupfuura paLinux, bvunzo dzinoratidza mashandiro ari nani.
Linus akataura kuti iyo Linux scheduler ndeyepasirese, yakanatswa kwemakumi emakore uye yakagadziridzwa kwete chete kune desktop nemitambo, asiwo kune mamwe marudzi emitoro shanda, semuenzaniso, masystem evhavha uye nekudaro unofunga nezve akawanda nuances pakuronga mabasa.
Wedzera chaiwo optimizations ayo anoderedza latency mumitambo Google Stadia inogona kuwedzera kupindura mune imwe nyaya, asi inogona kudzora mashandiro ese eanogadzira.
Semuenzaniso, iyo Windows scheduler inoita zvirinani mumiyedzo iri kukurukurwa sezvo iri nyore kwazvo kupfuura iyo Linux Shedhiyo uye inonyanya kugadzirirwa kune chaiwo desktop desktop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds Inoramba Linux Basa Rekugadzirisa Ine Stadia Port Nyaya